जमराको जुस : खाने कसरी, के फाइदा गर्छ ? - OpticalKhabar
होमपेज स्वास्थ्य जमराको जुस : खाने कसरी, के फाइदा गर्छ ?
जमराको जुस : खाने कसरी, के फाइदा गर्छ ?
DoroNepal.com 2:09 PM स्वास्थ्य,
यसरी गर्न सकिन्छ जमराको जुसको प्रयोग
जमराको जुस पिउनाले तपाईको शरीरमा धेरै फाइदा हुने गर्छ । यसका तपाईको शरीरमा पोषणको लाभका साथसाथै कैयौं अरु उपयोग पनि छन्
छाला चिलाउने समस्या समाधान गर्नको लागि छालामा जमराको जुस प्रयोग गर्नुहोस ।
यसले घामबाट डढेको छालालाई राहत दिने काम गर्दछ ।
सङ्क्रमण हुन नदिन पनि जमराको जुस प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
जमराको जुसलाई सौन्दर्य उपचारको लागि पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । खुकुलो छालालाई टाइट गर्नको लागि पनि जमराको जुसको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
नुहाउनु भन्दा अघि कपालमा जमराको जुसले मालिस गरेमा रुखो कपाल कम हुन्छ र टाउको चिलाउने समस्या अन्त्य हुन्छ ।
यसले काटेको, जलेको, दर्फर्याएको ठाउँमा, खटिरा भएको, किराले टोकेमा, फोका, अल्सर र ट्युमरमा फाइदाजनक हुन्छ ।
नुहाउने पानीमा जमराको जुस राखेर नुहाएमा लाभ हुन्छ ।
निद्रा नलागेमा आफ्नो बिस्ताराको छेउमा जमराकोे ट्रे राख्नुहोस । यसले हावामा अक्सिजनलाई बढाउँछ ।
जमराको जुसले कुल्ला गरेमा घाँटीको समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ ।
नुहाउनु भन्दा अघि जमराको जुसले कपालमा मालिस गर्ने र स्याम्पु लगाएर सफा पानीले पखालेमा कपालमा चायाँ आउने समस्याबाट टाढा जान सकिन्छ ।
जमराको जुस मुखमा पाँच मिनेट राखेमा दाँत दुख्ने समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ ।
माउथवासको रुपमा जमराको जुसलाई प्रयोग गरेमा गिजा र दाँतमा रहेका बिषाक्त पदार्थ बाहिर आउँछ ।
एक्वारममा जमराको जुसको बन्डल राखेमा पानी शुद्ध हुन्छ र बिरामी माछालाई ठिक गर्न सकिन्छ ।
आँखाको थकान भगाउनको लागि, दृष्टिमा सुधार गर्नको लागि र आँखा चिलाउने समस्याबाट राहत पाउनको लागि जमराको जुस प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
तपाईलाई रुघा लागेको छ भने जमराको जुसलाई नाकको प्वालमा राखेमा बन्द नाकलाई खोल्न मद्दत मिल्नेछ ।
जमराको जुसको फाइदाहरु
जमराको जुसका विभिन्न फाइदाहरु छन् । जस्तै :
जमराको जुसले ब्लड प्रेसर लो गराउँछ ।
जमराको जुसले बिषाक्त पदार्थलाई फालेर पाचन प्रणालीमा मद्दत पुर्याउँछ ।
यसले कपाल रुखो हुने समस्या र चाँया पर्ने समस्यालाई कम गर्दछ ।
जमराको जुसले सेता रक्तकोषको निर्माण गरेर शरीरलाई बाहिरी प्रदुषणबाट रक्षा गर्दछ ।
धावकहरुमा हुने समस्या जस्तै जोर्नीमा पीडा, अल्सर र किराले टोकेमा सुनिनबाट बचाउने काम गर्छ ।
रातो रक्त कोशिकाको निर्माण छिटो गरेर शरिरमा रगत बनाउँछ ।
यसले उत्साह बढाउँछ र थकानलाई कम गर्छ ।
जमराको जुसले कब्जियत हुनबाट रोक्दछ ।
जमराको जुसले रिसलाई शान्त गर्न मद्दत गर्दछ र श्वास गन्ह्याउने समस्यालाई कम गर्दछ ।
यसमा एन्टिबायोटिक तत्व हुनाले घाँटी दुखेमा यसको जुसले कुल्ला गरेमा आराम मिल्छ ।
जलन र सनबर्नको लागि एन्टिबायोटिकको रुपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
जमराको जुसले दाँत सड्नबाट रोक्छ ।
जमराको मुना चपाउँदा निद्रा हराउँछ र फुर्ती दिन्छ ।
जमराको जुसले कलेजो सफा गर्न मद्दत गर्दछ ।
जमरामा भएको क्लोरोफिल तत्वले रगतमा भएको चिनीलाई स्थिर राख्छ ।
जमराको जुसले ज्वरो कम गर्छ र बच्चाहरुको चिडचिडापनलाई हटाउँछ ।
जमराको जुस नियमित रुपमा प्रयोग गर्नाले छालामा भएको कालो दागहरु हटाउन मद्दत गर्छ । यसको प्रयोगले छालामा चमक दिन्छ र छालालाई चम्किलो बनाउँछ
क्लोरोफिल रक्तप्रवाहलाई पुनर्निर्माण गर्दछ । विभिन्न जनावरहरुको अध्ययनले क्लोरोफिललाई सबै विषाक्त पदार्थबाट मुक्त रहेको देखाएको छ । मिडवेस्टहोमा किसानहरु बाँझो गाई र गोरुलाई प्रजनन् क्षमता विकसित गर्नको लागि जमरा राखिदिन्छन् । क्लोरोफिलमा उच्च म्याग्नेसियम हुने भएकोले यसले इन्जाइम निर्माण गर्दछ । जसले सेक्स हर्माेनलाई पुन स्थापित गर्दछ ।
जमराको जुसमा उपलब्ध क्लोफिल सजिब स्रोतहरुमा पाइने सबैभन्दा राम्रो स्रोतमध्ये एक हो ।
डा. बर्नाड जेन्सन भन्छन् जमराको जुस पचाउन केही मिनेट लाग्छ र पचाउनमा शरीरको कम उर्जा उपयोग हुन्छ ।
क्लोरोफिल धेरै बोटविरुवाबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । ती मध्ये जमरा राम्रो मानिन्छ । किनकि यसबाट मानिसलाई आवश्यक पर्ने १०० भन्दा धेरै तत्वहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ । यदि यसलाई जैविक माटोमा उत्पादन गरिन्छ भने यसले थाहा भएको १०२ खनिज मध्ये ९२ खनिजलाई सोस्छ ।
अमेरीकन जर्नल अफ सर्जरी, १९४० मा बेन्जामिन ग्रुस्किन, एमडिले संक्रमणबाट बच्नको लागि क्लोरोफिललाई सिफारिस गरेका छन् । उनको लेखबाट थाहा हुन्छ क्लोरोफिलको उपयोगले फोहर गन्धलाई हटाउँछ । घाउ, छालामा भएको छिद्रण, पुरानो भित्रि कानको दुखाई र सङ्क्रमण , खुट्टाको अल्सर , अन्य चिलाउने समस्या, मलाशयको घाउ, टाईफाइटलाई ठीक गर्दछ र सफलतापूर्वक अन्य दुखाइको पनि अन्त्य गर्दछ । । यसको प्रयोगले रिसलाई पनि कम गर्न मद्दत गर्दछ ।
जमराको जुसको डण्डीफोर सन्चो हुन्छ र सात देखी आठ महिना पुरानो दाग वा धब्बालाई हटाउँछ । त्यो समयमा खानपानमा सुधार गर्नुु आवश्यक छ ।
Posted by DoroNepal.com at 2:09 PM